Ny vaovao rehetra momba ny Apple Watch Series 7 vaovao avy amin'ny Apple | Vaovao IPhone
Ny vaovao rehetra momba ny Apple Watch Series 7 vaovao avy any Apple
El hetsika omaly Natao ho an'ny vokatra Big Apple vaovao io. Araka ny tsiliantsofina re, ny Apple Watch dia ho iray amin'ireo fitaovana handray fanovana be indrindra, ary misy resaka momba ny famolavolana endrika lalina. Na izany aza ny Apple Watch Series 7 dia tsy nanome izany fiovana lalina izany tamin'ny sehatra hita maso ary noho izany dia mpampiasa maro no sosotra tamin'ny honohono tato anatin'ny volana vitsivitsy. Ny fiambenana Apple vaovao manana efijery lehibe kokoa, dialma azo amboarina vaovao, ary famoahana haingana kokoa noho ny teo aloha. Lazainay aminao ny vaovao rehetra momba ity fitaovana vaovao eto ambany ity.
1 Ny efijery rehetra: ny Apple Watch Series 7 miaraka amin'ny frame 40% vitsy kokoa
2 Mihoatra lavitra ny efijery ny famolavolana
3 Fikojakojana ny safidy ara-pahasalamana: ECG, O2 ary ny tahan'ny fo
4 Rafitra famenoana 33% haingana kokoa
5 Ny namana tonga lafatra amin'ny Apple Watch Series 7: watchOS 8
6 Fitaovana ho an'ny famantaranandro Apple vaovao
7 Fahafahana sy famitana ny Apple Watch Series 7
Ny efijery rehetra: ny Apple Watch Series 7 miaraka amin'ny frame 40% vitsy kokoa
Iray amin'ireo tanjona nomarihin'i Apple tamin'ny fanombohany Apple Watch vaovao ny fampitomboana ny efijery. Amin'ity tranga ity dia mamerina izy ireo fa nitombo Faritra fampisehoana 50% raha ampitahaina amin'ny Apple Watch Series 3. Notendrena izy ireo hanala ireo frame sy hanitatra ny efijery, hampihena ny frame hatramin'ny 40% ary hahatratra a 20% fijerena bebe kokoa noho ny amin'ny andiany 6.
Apple androany dia nanambara ny Apple Watch Series 7, misy ny fisehoana Retina-amin'ny fisehoana Retina hatrany amin'ny faritra misy efijery lehibe kokoa sy sisiny manify, ka io no fampisehoana lehibe indrindra sy mandroso indrindra hatramin'izay.
Ny efijery Apple Watch Series 7 dia a Fampisehoana OLED Retina foana izay nohavaozina indray manana sisiny mahia. Raha ny marina, ny sensor sy ny tontonana OLED dia mipetraka amin'ny ampahany iray ihany ankehitriny ka nihena ny hatevin'ny efijery, naka toerana kely kokoa ary manome safidy fanatsarana hafa ho an'ny atin'ny fitaovana.
Ity fampisehoana Retina ity dia manohana hatrany ny safidy 'On On' foana, izay mamela ny seho haneho fampahalalana sarobidy foana. Raha ny marina, ny Apple Watch Series 7 sy ny efijery dia mihamiratra izao 70% ao anaty trano rehefa avelanao hampiasa ity endri-javatra ity.
Mihoatra lavitra ny efijery ny famolavolana
Ho an'i Apple, ny famolavolana dia mihoatra lavitra ny efijery. Drafitra nohavaozina tanteraka no nandrasana, nandao ny fiolahana mba hanome lalana ho an'ny tranga toradroa kokoa amin'ny fomban'ny iPhone 12. Na izany aza, ny ananantsika dia Apple Watch Series 7 miaraka amina endrika mitohy izay itoerany ny efijery miolaka sy chassis matanjaka. Io fanoherana io koa dia mahatratra ny voalohany izay nisy fiantraikany ihany koa hampitombo ny hamafin'ny efijery.
Ny fahazoana fampisehoana Retina lehibe kokoa hatrany dia midika fanavaozana ny lafiny fototra amin'ny famolavolana. Ary izany dia nahafahan'izy ireo nitondra ny tanjaky ny vera teo aloha ho any amin'ny ambaratonga manaraka.
Ny vera eo anoloana ambonin'ny efijery dia novaina mahatonga azy ho mafy orina sy mahatohitra tohotra. Amin'ny haavon'ny angon-drakitra, 50% kokoa noho ny Apple Watch Series 6 ity vera ity, ka priori iray dia mahazaka in-droa. Manohy manamarina ny fanoherana ny vovoka, rano ary tohina, toy ny tamin'ny taranaka taloha. Amin'ny haavon'ny rano izy io mahatohitra hatramin'ny 50 metatra ny halaliny.
Ny endriny ankapobeny amin'ny Series 7 dia miavaka amin'izany zoro malefaka sy boribory miampy a Ny sisin'ny reflexactive an'ny efijery. Ity sisiny ity dia manambara ny faran'ny efijery sy ny fiandohan'ny boaty. Io dia ahafahanao milalao amin'ny sehatra izay afaka mibodo ny efijery iray manontolo mba hanatsarana ny toerana misy.
Nisy dialy roa manokana natokana koa hanatsarana ny haben'ny efijery: Duo Contour sy Modular.
Fikojakojana ny safidy ara-pahasalamana: ECG, O2 ary ny tahan'ny fo
Ny Apple Watch Series 7 dia tsy ahitana sensor vaovao momba ny fahasalamana. Raha ny marina dia voatazona ireo sensor rehetra an'ny Series 6. Anisan'ireny no ahitantsika ny mety manao electrocardiograms amin'ny firaka I, maka ny tahan'ny fo ary mandrefy ny hakitroky ny oksizena amin'ny ra. Ity data ity dia dinihina amin'ny alàlan'ny watchOS 8 ary mamela handefa fampandrenesana ho an'ny mpampiasa na amin'ny alàlan'ny tolo-kevitra na fanamarihana.
Ny fanavaozana ny WatchOS 8 dia manolotra fanovana vaovao eo amin'ny sehatry ny fahasalamana toy ny ny fahitana ny isan'ny fofonaina isa-minitra izay ampian'izy ireo ho masontsivana amin'ny famakafakana ny torimaso. Ny Series 7 dia manohana ihany koa ny fisongadinan'ny Crash Detection an'ny rafitra fiasa vaovao izay hahita ny hazavan'ny andro amin'ny herinandro ho avy.
Rafitra famenoana 33% haingana kokoa
Ny rafitra famandrihana vaovao an'ny Apple Watch Series 7 dia 33% haingana kokoa noho ny Series 6. Raha ny marina dia nampanantena i Apple fa amin'ny fiampangana 8-minitra dia azo raketina ny angon-drakitra 8 torimaso. Zava-misy lehibe izany satria maro ny mpampiasa no miantoka ny famantaranandro amin'ny alina mba hananany bateria amin'ny maraina, ka tsy hanana fanaraha-maso torimaso izy ireo izay manome fampahalalana mifandraika amin'ny mpampiasa.
Ity rafitra vaovao ity dia noho ny USB-C mamehy tariby izay nampiditra an'i Apple Ao amin'ny andiany 6. Ho fanampin'izany, dia nasongadina fa ny Series 7 ihany no mifanaraka amin'ity sarany haingam-pandeha ity, na dia misy tariby vaovao aza, ny sisa amin'ny famataranandro dia haka fotoana mahazatra handoavana tanteraka ny bateriny.
Ny namana tonga lafatra amin'ny Apple Watch Series 7: watchOS 8
watchOS 8 no rafitra fiasan'ny Apple manaraka ho an'ny Apple Watch. Rehefa manomboka mandefa ny Apple Watch Series 7 voalohany, dia efa hapetrany amin'ny alàlan'ny default ity rafitra ity. Ny zava-baovao dia mitoetra eo ambonin'ny rehetra fampiharana izay mamela anao hampitombo ny fiasan'ny fitaovana y sehatra vaovao ahafahanao manamboatra ny famantaranandro.
Anisan'ireny, misy sehatra vaovao mampifangaro sary amin'ny maody fakana sary nalaina tamin'ny iPhone, ny fanamorana ny fandefasana sary ao anaty Messages na ny fampidirana lakile hanokatra varavarana marani-tsaina. Niampy koa Fomba fampifantohana izay toerana efa voafaritra mialoha hialana amin'ny fanelingelenana rehefa manao asa samihafa isika. Ireo fiasa rehetra ireo dia hiantohana fa ny Apple Watch Series 7 dia afaka mamita ny fahombiazany tsara indrindra amin'ny endri-javatra lehibe.
Fitaovana ho an'ny famantaranandro Apple vaovao
Nasiana fehy vaovao koa ho an'ny Apple Watch Nike sy Hermès. Ilay nohavaozina Nike Sport Loop misy loko vaovao telo ary misy ny sary famantarana ny logo sy ny logo an'i Swosh natsofoka ao anaty lamba fehikibo. Ity fehin-kibo ity dia mandeha amin'ny dial an'ny Nike Bounce vaovao izay misy sary mihetsika mifandraika amin'ny fihetsiky ny tanana, ny Digital Crown na ny fikasihana eo amin'ny efijery.
Ao amin'ny Apple Watch Hermès dia tafiditra ao izy ireo Circuits H y la Gourmette Double Tour manome sento glamor an'ilay smartwatch vaovao an'ny paoma lehibe. Ity farany dia manome voninahitra ny rojo Hermès tamin'ny taona 30 miaraka amin'ny rohy izay miharo amin'ny hoditra marefo. Ny loko vaovao dia ampidirina amin'ireo fehin-kibo roa ireo ho an'ny tady Hermès Classic, Attelage ary Jumping.
Fahafahana sy famitana ny Apple Watch Series 7
Ny Apple Watch Series 7 dia misy amina habe roa: 41mm sy 45mm, toy ny tamin'ny taranaka taloha. Ny famaranana dia misy amin'ny vy vy, alimo na titanium. Loko vaovao efatra no atolotra ao anatin'ny famaranana aluminium: Green, Blue, (PRODUCT) RED, Star White, ary Mamatonalina.
Ho misy amin'ity fararano ity ary hanomboka amin'ny $ 399. Ho fanampin'izany, Apple dia nanapa-kevitra ny hamidy ankoatra ny Series 7, ny Series 6 (amin'ny $ 279), ny SE (From € 299) ary ny Series 3 (avy amin'ny € 219).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny vaovao rehetra momba ny Apple Watch Series 7 vaovao avy any Apple
Izany hoe famantaranandro izay tsy manampy zava-baovao raha ampitahaina amin'ny andiany 6.
Joa dia hoy izy:
Scl. Toa mbola tsy namaky ilay lahatsoratra ianao.
Tsy misy ny fanatsarana voalaza tao amin'ireo honohono (izay no mahatonga ny tsaho). Manana 6 aho ary tsy hividy ilay… tsy mitovy famantaranandro.
Mamaly an'i Joa
Ny iPhone XR sy ny iPhone 12 Pro dia manao veloma: ity no faritra iPhone
Andao hojerentsika akaiky ny taranaka fahasivy an'ny iPad izay natomboka omaly